Dreame H11 lena sy maina, fanadihadiana lalina | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 28/12/2021 10:59 | General, hevitra
Omeo anarana aho dia mijanona ho iray amin'ireo orinasa manolotra tahan'ny kalitao / vidiny tsara kokoa amin'ny sehatry ny fanadiovana trano marani-tsaina, indrindra raha miresaka momba ny mpanadio banga, robot ary kojakoja hafa izay mifantoka amin'ny fanamorana ny fiainantsika isika rehefa manadio ny tranontsika. .
Amin'ity indray mitoraka ity isika dia hijery lalina ny H11 Wet and Dry vaovao, mpanadio banga izay misasa lalina sy mikosoka ao anatin'ny lalana tokana. Asehonay anao ity vokatra Dreame vaovao ity ary lazainay aminao ny zavatra niainanay tamin'ny fampiasana tsy tapaka an'ity vokatra ity izay nanova ny sehatra iray izay tsy dia misy safidy maro atolotra.
2 Ny votoatin'ny fonosana sy ny fahafaha-manao
3 Toetra teknika sy traikefa amin'ny mpampiasa
Rehefa miloka amin'ny marika toa an'i Dreame ianao, dia efa fantatrao izay andrasana amin'ny lafiny famolavolana sy ny fitaovana, dia nasongadina tamin'ny endriny tsara sy ny plastika maivana nefa mahatohitra izay nanome ny ankamaroan'ny vokatra ao aminy toetra tsy manam-paharoa, ary tsy To ho kely kokoa miaraka amin'ny mpanadio banga H11 vaovao, izay azontsika ifandraisana haingana amin'ny marika Aziatika raha vao jerena. Ny refy dia tena voatonona, ary izany dia miaraka amin'ny lanjan'ny manodidina 4,7 Kg amin'ny vatana somary tafahoatra.
Ity fitaovana tsy mampino ity dia mety ho anao amin'ny vidiny tsara indrindra
Ny fampiononana dia tsy hanjaka, mazava ho azy, na izany aza, ny rollers sy ny herin'ny borosy dia hahamora ny fanatanterahana ny pass. Sarotra kokoa ny porting, noho izany dia misy tobim-piantsonan'ny fiampangana sy fanadiovana tena izay hapetraka amin'ny tany. Azo antoka fa tsy mijery ny vokatra maivana sy be mpampiasa indrindra amin'ny marika isika, na izany aza, tokony hojerentsika ny tanjon'ny Dreame H11, lavitry ny fanadiovana maivana sy mahazatra, fa mifantoka amin'ny toerana midadasika sy manana fahafahana miditra be dia be. Izany rehetra izany dia tokony hojerentsika alohan'ny hirosoana amin'ny fividianana.
Ny votoatin'ny fonosana sy ny fahafaha-manao
Lavitry ny mety ho toa azy, ity Dreame H11 ity dia tonga ao anaty fonosana somary matevina, maivana sy azo esorina ny tahony aluminium, ankoatra ny ahafahantsika mitantana ny fiasan'ny mpanadio banga amin'ny bokotra misy fikasihana tsara. Ny vatana misy ny motera, ny kifafa ary ny siny rano roa dia apetraka mivantana eo amin'ny boaty, ary azo esorina avokoa ny kojakoja fitafy sy fikojakojana, toy ny mitranga ao amin'ny Dreame. Miaraka amin'ny rafitra "tsindrio" dia hametraka ny tahony isika ary hanana ny Dreame H11 ho tafavory tanteraka hanomboka amin'ny fitsapana voalohany.
Ny votoatin'ny fonosana araka ny voalazanay dia somary spartan, hitanay ny vatana lehibe misy ny tanky roa, ny motera ary ny kifafa, ny famandrihana sy ny fanadiovana tena, miaraka amin'ny adaptatera herinaratra ary karazana «borosy» misy ny fanampin'izany ho an'ny rano na ranoka fanadiovana izay hanampy antsika hihazona ny fitoeran-drano ho madio. Amin'ity fizarana ity ny Dreame H11 dia manome antsika fahatsapana tsara, haingana ny fametrahana ary tsy mila torolàlana izahay handeha. Marihina fa ny Dreame dia misy rano fanadiovana manokana izay ho azonay hividianana mitokana tsy ho ela, na dia mbola tsy nahita ny fivarotana aza.
Izany hoe, mety hanontany tena ianao hoe nahoana isika no miteny amin'ny teny maro "Deposito", Izany dia satria ny Dreame H11 dia manana fiara mifono vy roa samy hafa, iray amin'ny rano maloto 500ml izay hita eo amin'ny tapany ambany amin'ny kifafa, ary rano madio 900ml ny iray izay miandraikitra ny fanomezana ny mop miaraka amin'ny rano fanadiovana. Io fitoeran-drano maloto io ihany koa no tompon'andraikitra amin'ny fanatobiana ny loto izay tsikaritra.
Ny tontonana famantarana ny asa eo an-tampony dia hampiseho antsika ny fomba fanadiovana roa: Standard sy Turbo. Toy izany koa, hampahafantatra antsika ny isan-jaton'ny bateria tavela ary raha mandeha amin'io fotoana io ny fomba fanadiovana tena, izay tokony ho eo amin'ny toby fiampangana. Toy izany no ahitantsika bokotra roa eo anoloana eo amin'ny tahony mba hifehezana ireo hery fanadiovana samihafa, ary ny iray eo amin'ny tapany ambony amin'ny tahony izay miandraikitra ny fampandehanana ny fomba fanadiovana tena.
Toetra teknika sy traikefa amin'ny mpampiasa
Hiresaka momba ny fizakan-tena aloha isika, Ny Dreame H11 dia manana bateria 2.500 mAh izay hanome antsika fahaleovan-tena mandritra ny 30 minitra amin'ny fomba mahazatra, hihena be izany raha mankany amin'ny fomba fijery turbo noheverin'i Dreame. Ho an'ny ampahany, ny mpanadio banga dia manana a 10.000 pascal hery suction, ambany kely noho izay atolony amin'ny fitaovana hafa toy ny mpanadio banga tànana malaza indrindra, izay mety hahatratra hatramin'ny 22.000, izany hoe ny borosy rotary hatramin'ny 560 revolisiona isa-minitra Hanampy amin'ny fisamborana ny loto mifono indrindra izany ary ahafahan'ilay fitaovana miasa amin'ny herin'aratra ambany kokoa.
Ho an'ny ampahany, hahatratra 76dB ny tabataba izay lavo lavitra noho ny vokatra tsara indrindra azon'ilay marika natolotra tamin'ny fitaovana hafa. Amin'ny maha-tombony azy dia manana fahafahana hividy izany izahay Amazon, miaraka amin'ny antoka rehetra ao anatin'izany.
Ny iray amin'ireo olana lehibe hitanay, ankoatra ny lanja, dia ny hatevin'ny borosy, izay manakana antsika tsy hiditra amin'ny fanaka sasany, amin'ny fomba mitovy ary amin'ny fiheverana ny toerana halehan'ny Dreame H11, dia mety ho mahaliana ihany koa ny mampiditra jiro LED eo amin'ny borosy. Ho azy, ary araka ny efa nampoizina, Ny vokatry ny parquet dia manimba, ny rano be loatra dia hamela marika hita maso, na izany aza, ity dia vokatra natao manokana ho an'ny gorodona porcelain, stoneware ary na vinyl aza, izay nahitana vokatra tsara kokoa.
Ity Dreame H11 ity dia vokatra manavao izay mametraka ny fenitra harahina amin'ny sehatra ho toy ny fanondroana, na dia manana teboka tsy dia misongadina toy ny lanjany sy ny fidirana sarotra eo ambanin'ny fanaka aza izy, dia manana hery miforitra tsara, fitaovana fanorenana sy vita ary izany. hanamora ny zavatra ho antsika raha mbola tsy manana parquet na hazo gorodona. Ny vidiny dia manodidina ny 320 euros amin'ny fivarotana mahazatra toa an'i Amazon.
H11 lena sy maina
Navoaka tamin'ny: Desambra 28 amin'ny 2021
Fanovana farany: Desambra 28 amin'ny 2021
Akora vita tsara sy miantoka ny famolavolana
Hery tsara sy vita amin'ny porcelain tsara
Ratsy ny fidirana amin'ny fanaka ambany
Ny vokatra ratsy amin'ny parquet
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Dreame H11 Wet and Dry, famerenana lalina an'ity vacuum / mop ity